13 / 01 / 2020 - RayHaber | raillynews
Andro: 13 Janoary 2020
Minisitry ny Turhan: 'Ho vita tahaka ny 2026 ny tetikasa Kanal Istanbul'
Ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Tiorka Cahit Turhan dia nanao fanambaràna mikasika ny Tetikasa Istanbul. Nanazava i Turhan ny antony ilana ny Canal Istanbul, rano ampiasaina amin'ny fitaterana an-dranomasina iraisam-pirenena ny Bosporus. [More ...]
Amin ny fakana am-bavany azy ireo, ny voafonja am-pitsapana, ny lalamby lalamby, ny rafitry ny fametrahana ny lalamby, indrindra ny tsy fisian'ny fanazaran-tena, ny tsy fitandremana amin'ny fiofanana voatanisa. Araka ny vaovao tany Evrensel; Fifidianana 24 XNUMX jona na dia tsy misy rafitra famantarana aza [More ...]
Torkia Wagon Industry Inc. National Electric Train fanentanana natomboka. Hanafaingana ny asany ity orinasa ity ary miasa ny asabotsy izao ny mpiasa. Ny lamasinina nasionaly dia mikasa handeha eny an-dàlana teny amin'ny faran'ny volana jona na Jolay. vorontsiloza Wagon [More ...]
Ben'ny tanànan'ny Metropolitan Sakarya Ekrem Yüce dia nilaza fa hisy ny fanadihadiana momba ny tetikasa tram nostalgic, izay natao vao haingana tamin'ny fivoriana fampidirana. Raha niresaka tao amin'ny filankevitry ny tanàna, Mahery Indrindra, dia nanontany ny mponina sy ny mpivarotra ny fanadihadiana. Greater Munisipaly [More ...]
Fitaterana 23 taona any Alemana
Ny varotra iraisampirenena no mandrafitra ny toe-javatra iraisan'ny firenena mifampiraharahana. Ny firenentsika sy ny mpifanolobodirindrina aminy ary firenena any ivelany, ary koa ny saika rehetra taloha [More ...]
Ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Mehmet Cahit Turhan, fiaran-dalamby haingam-pandeha dia nanome vaovao momba ny asa. Ny minisitra Turhan, fanodinana YHT, mitondra amina faritra iray amin'ny fanandramana test dia hanomboka amin'ny volana martsa, hoy izy. [More ...]
Denizli Ski Center mihazakazaka amin'ny firaketana miaraka amin'ny isan'ireo mpitsidika
Denizli Ski Center, izay iray amin'ireo toerana iresahana indrindra amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny ririnina, mihazakazaka mankany anaty firaketana miaraka amin'ny isan'ny mpitsidika. Amin'ny vanim-potoana vaovao, nitsidika olona manodidina ny 50.000 hatreto ny Centre ity. [More ...]
Fampiasam-bola atao hampitomboana ny mahasarika an'i Boztepe
Ny Munisipaly Metropolitan Ordu dia manohy ny fametrahana fampiasam-bola izay hampitombo ny fisarihana Boztepe. Ato anatin'ny faritry ny tetikasa, hankafy an'i Boztepe ny olom-pirenena miaraka amin'ny lalana an-tongotra mitaingina vato, lalana varotra 27, fikambanan-tany maintso. [More ...]
Ny fitsapana voalohany tamin'ny lozam-pifamoivoizana haingam-pandeha tany Ankara tamin'ny Desambra 2018, ka sivy tapitrisa no maty ary olona 80 mahery no naratra, nanomboka tao amin'ny Fitsarana Ankara. Telo amin'iny tranga iny [More ...]
Ny fandaharana Palandöken dia mivelatra amin'ny fanentanana ara-panatanjahantena
Ny Festival Palandöken, nokarakarain'ny Kaominaly Metropolitan Erzurum ao amin'ny Palandöken Ski Center, dia safotry ny mpankafy fanatanjahan-tena. Fiakaran'ny ranomandry artifisialy, ski mitazona bisikileta, sary sokitra misy ny ranomandry ary maro hafa [More ...]
Konya Mampihatra ny fanamafisam-pahefana amin'ny fika Metropolitan
Konya Metropolitan Munisipaly, làlan-kianjan'i Gaza Street miaraka amin'ny City Street amin'ny fanesorana ny fampiharana intersection Dynamic Junction Control System (Intelligent Junction) izay efa lasa. Aydınlıkevler Junction, Selçuklu Junction, TOKİ Fırat Junction, Karatay Industry [More ...]
Crazy Projects Pro 320 Billion Lira
Ny tetik'asa adaladala ataon'ny filoha Tayyip Erdoğan Kanal dia voafaritra ho toy ny fandaharana agenda İstanbul Channel Istanbul sür. [More ...]
Ny filohan'ny GSO Adnan Ünverdi, ny teknolojia nasionaly sy an-trano ao anatin'ny sehatry ny hetsika miaraka amin'ny fiara an-trano misy antsika dia nandalo fiovana lehibe teo amin'ny firenentsika, hoy izy. Filohan'ny Indostrian'ny Gaziantep (GSO) Adnan Ünverdi, nasionaly ary [More ...]
Başakşehir Kayaşehir Metro Line Tsy voasakan'i Imamoğlu
Mifanohitra amin'ny filazan'ny minisitry ny fitaterana sy ny fotodrafitrasa Mehmet Cahit Turan, dia hita fa ny filoham-pirenena Istanbul Metropolitan (IMM), izay nampitsahatra ny fananganana lalamby Basaksehir-Kayasehir mifandray amin'ny hopitaly ao an-tanàna fa tsy Ekrem Imamoglu fa Mevlut Uysal. Fitaovam-pitaterana [More ...]